Indipendente 10680 WireE stato molto tempo da qua - Page 12 of 103 - https://themummichogblog.com
03 Lees পাইথন পলল আবিষ্কৃত
<গ> Lees <ই> (= পাইথন, অর্থাত জন Cleese থেকে মন্টি পাইথন এর উড়ন্ত সার্কাস); প্রথমে “অপ-আচ্ছাদিত” অর্থে গত অক্ষর বাদ করছে
05 আনন্দবাদী প্রমত্ত পার্টি ভারপ্রাপ্ত মহিলা দ্বারা অনুষ্ঠিত
[না (= পক্ষ) মুরগি মধ্যে (নারী =)] আমি / সি (= ভারপ্রাপ্ত); আনন্দবাদী আনন্দবাদী জন্য একটি প্রতিশব্দ হয়
06 MUSCADELLE ঠিকাদার দোকানে একটা চাবি দ্রাক্ষা
পেশী (= ঠিকাদার) এ [একটি (= একটি) + Del (= কী, অর্থাত একটি কীবোর্ড মোছা)]; muscadelle একটি সাদা ওয়াইন দ্রাক্ষা বৈচিত্র্য
07 উচ্চে স্থাপন প্রশংসা পুরাতন নাবিক গোপন সংবাদের ছিল থাকার?
সাবেক (= পুরাতন, সাবেক) + + <গুলি> Alt (= নাবিক; “গোপন সংবাদের ছিল থাকার” অর্থ প্রথম চিঠি অবনমিত হয়েছে)
শান্ত গজ মধ্যে 08 শেরি Wander – এটা সুরক্ষিত হচ্ছে
ভুল (= বেড়ান) [শুট আউট (= (হতে) শান্ত) + + ওয়াই (= গজ)]; শেরি সুরক্ষিত ওয়াইন
09 Claret কিছুটা ভাল এলকোহল আপ পরিসেবা উপলব্ধ করা হবে
লুকায়িত ( “কিছুটা) এবং উল্লম্বভাবে বিপরীত ভাল এলকোহল” এ ( “আপ পরিসেবা উপলব্ধ করা হবে)” “; আধা & শয়নকামরা
14 OENOLOGIST এক্সপার্ট এক অবস্থায় লোয়ীর পেয়েছিলাম
* (এক না Lois); “একটি রাজ্যের” কোনো শব্দ বা শব্দগুচ্ছের অক্ষরগুলিকে এদিক-ওদিক করে গঠিত শব্দ বা শব্দগুচ্ছ সূচক; একটি oenologist একটি ওয়াইন বিশেষজ্ঞ
17 SOMMELIER ওয়েটার মেনু উপরের প্রায় মিথ্যা বয়ন
এম <Enu> * (আরো মিথ্যা) ( “উপরের” শুধুমাত্র প্রথম চিঠি মানে); “বয়ন” কোনো শব্দ বা শব্দগুচ্ছের অক্ষরগুলিকে এদিক-ওদিক করে গঠিত শব্দ বা শব্দগুচ্ছ সূচক; একটি sommelier একটি রেস্টুরেন্টে একটি ওয়াইন ওয়েটার হয়
18 চরম পরীক্ষা আলটিমেট একটি পুলিশ নির্ধারণী মেলে বিভাগীয়?
Cryptically, “একটি সিআইডি (= ফৌজদারি তদন্ত বিভাগের) পরীক্ষা” একটি পুলিশ বিভাগীয় ম্যাচ হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে
20 স্থানে sprites অশরীরী লোক স্পিন
জনসংযোগ (= স্পিন অর্থাত জনসংযোগ) সাইট (= স্থানগুলি)
21 পাস বাই উপেক্ষা করুন অনধিকৃত বেন্টলি উপর টিকেট
পাস (= টিকেট, পারমিট) + + বি <entle> ওয়াই ( “অনধিকৃত” অর্থ সব কিন্তু প্রথম এবং শেষ চিঠি বাদ করা হয়)
22 একত্র মিশ্রিত ট্রান্সফার বাক্সে Geordie মানিকজোড় সাইকেল
পিপীলিকা এবং ডিসেম্বর একটি “বাক্সে Geordie মানিকজোড়” হয়; “সাইক্লিং” ইঙ্গিত করে যে দুটি নাম বৃত্তাকার আনা হয়
24 জন্মদান কিছুই আঙ্গুর মেষসংক্রান্ত লাজুক বাহক
হে (= কিছুই pictorially) + + Vine (= বাহক আঙ্গুর)
26 পেরু Paddington হোম পৃষ্ঠাতে প্রাথমিকভাবে রেল ইউনিয়ন রাগিয়ে দেয়
পি (= পৃষ্ঠা) + E ব্যবহার <nrages> আর <পীড়িত> ইউ <nion> ( “প্রাথমিকভাবে” অর্থ প্রথম অক্ষর শুধুমাত্র ব্যবহার করা হয়); Paddington বিয়ার মাইকেল বন্ড দ্বারা শিশুদের গল্পের পেরু থেকে উত্পন্ন
လွတ်လပ်သော 10.680 / ဝါယာကြိုး
ဒါဟာဝါယာကြိုးကပဟေဠိ Blog သို့ငါ့အားကျဆင်းသွားပြီးကတည်းကအချိန်ကြာမြင့်စွာရှိခဲ့သည်။
ငါသည်ဤ 2021 ၌ငါ့ blogging တာဝန်များကိုချွတ်ကန်ဖို့ပျော်စရာ, မအလွန်အမင်းအခွန်, ပဟေဠိဖြစ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ယနေ့အင်္ဂါနေ့သည်အတိုင်း, တစ်ဦးဆောင်ပုဒ်မျှော်လင့်ထားခံရဖို့ဖြစ်တယ်, ဒီတစ်ခုကြောင့်အများကြီးဆိုတာတွေ့ရဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူသည်: လျှပ်စစ်လိုင်းကဖန်ဆင်းထားသည်နှင့်မည်သို့ပြုလုပ်စားသုံးဘယ်လို, စပျစ်ရည်ကိုများစွာကိုးကားပါရှိသည်။ အမှန်စင်စစ်အကြောင်းအရာအလိုက်အကြောင်းအရာတစ်ခုမဟုတ်ဘဲအထင်ကြီးပမာဏကိုဇယားကွက်ထဲမှာနေရာချပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အကြှနျုပျ၏နောက်ဆုံး-သူတွေကို-in ကိုယနေ့ 6, 11 နဲ့ 13 မှာထှေးသော entries တွေကိုခဲ့ကြသည်, ရာ၏ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုငါ့ထံသို့ကျွမ်းတဝင်မရှိသောခဲ့ကြသည်ပေမယ် wordplay ထံမှကျေနပ်ဖွယ်ထွက်အလုပ်လုပ်ခဲ့နိုငျသညျ။
အကြှနျုပျ၏အကွိုကျဆုံးသဲလွန်စယနေ့အသက်အရွယ်အဘို့ခန့်မှန်းငါ့ကိုစောင့်, “အိုး” ၏အသုံးပြုမှုအတွက်,4ကြ၏ အဆိုပါတစ်ပြားမှနောက်ဆုံးတွင်ကျဆင်းသွားသောအခါအကြှနျုပျကိုပြုံးအောင် 13, 12 နှင့် 23, နှစ်ဦးစလုံးရဲ့မျက်နှာပြင်ချောမွေ့ဘို့။
* ( … ) တစ်ဦးဆန့်ကျင်ဘက်ညွှန်ပြ; အဓိပ္ပာယ် italicised နေကြသည်; မျိုးစုံ-ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်သဲလွန်စအတွက် // ခွာအဓိပ္ပာယ်
နေ၏အနေဖြင့်မှတ်ချက်ခိုးယူစီမံခန့်ခွဲရန် 01 DOCILE လြယ္ကူ
<မိုင်> CILE (= နကွေ၏) လုပျဆောငျ; “note ကိုခိုးယူ (= မိုင်)” နည်းလမ်းအက္ခရာများ “မိုင်” ကျဆင်းသွားနေကြတယ်
အိုးထဲသို့သွင်းထား 04 CHAMPERS Posh ပစ္စည်းပစ္စယခင်ပွန်း
CAMPERS အတွက် H ကို (= ခင်ပွန်း) (= “အိုး” တနည်းသူတို့အားအစေးရွက်ဖျင်တဲ!)
10 Marvel ရုပ်ပြထုတ်ဝေသူအယ်ဒီတာအံ့သြခဲ့ left
Marvel (= ကာတွန်းထုတ်ဝေသူ) + L ကို (= လက်ဝဲ) + ED (= အယ်ဒီတာ)
အိတ္စပရပ္ပျှမ်းမျှ 11 SOAVE Verona ရဲ့တစ်စက်
“အိတ္စပရပ္ပျှမ်းမျှ” ၌ ( “၏”) Hidden; Soave ခြောက်သွေ့ဖြစ်ပါသည်, ဤအရပ်မှ “(အရက်၏) Verona ရဲ့တစ်စက်” Verona ၏သေးငယ်တဲ့ဒေသအရှေ့ကနေဝိုင်ဖြူဖျော့
ငေါ (= စီမံကိန်းထွက်ကပ်) တွင် S ကို (= ရေးကျွောငွာအတွက်အောင်မြင်ခဲ့); ဥပမာ, ကိုယ့်ကြောင့်ငါပါးမုနျးမှေးကဖန်ဆင်း = လုပ်
ဖြစ်ကောင်းနှစ်ဖက် switched သူ 13 TRANSACTOR Player ကိုညှိနှိုင်းရေးရရှိသွားတဲ့
ယခုလို, ဖြစ်ကောင်းနှစ်ဖက် switched ရဲ့သူတစ်ဦးကကစားသမား ( “သရုပ်ဆောင်”), တနည်းတစ်လိင်ပြောင်းလဲမှုခဲ့တဲ့ “trans ဆိုတဲ့-သရုပ်ဆောင်” အဖြစ်ဖော်ပြထားနိုင်!
* (နားမထောင်တီဗီ); “ထုတ်လွှင့်” ဆန့်ကျင်ဘက်ညွှန်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်
16 ဒိန်ခဲတိုချုပ်ကောင်းချီးပေးတောင်ဘက်-အရှေ့ Cheshire ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး
Chee <r> (= ကောင်းချီးပေး; “ခေတ္တ” နည်းလမ်းနောက်ဆုံးအက္ခရာကျဆင်းသွား) + အရှေ့တောင် (= တောင်ဘက်-အရှေ့)
အချည်းနှီးသောပြပွဲဇောက်ထိုးကျဆင်းပြီးနောက်စိတ်မကောင်းပါဘူး 19 လိုက်. တိုက်
S က <ဟို> W က (+ အားလုံးနည်းလမ်းများ “သွန်” ဒါပေမယ့်ပထမနှင့်နောက်ဆုံးအက္ခရာများကျဆင်းသွားနေကြသည်သည်းခံပါ (= တောင်းပန်ပါတယ်, အာမေဍိတ်ကဲ့သို့)
21 POLEMIC န်ထမ်းများဖြစ်နိုင်သည် bug ကိုရတဲ့အငြင်းပွားဖွယ်ရာဖန်တီး
ဝင်ရိုးစွန်း (ဆိုလိုတဲ့ဝှကျထားမိုက်ခရိုဖုန်း = bug ကိုဖြစ်နိုင်) (= န်ထမ်းများ, လှံတံကို) + MIC
22 ခရီးသွားလုပ်ငန်း Cruise နဲ့လည်းဝေလငါးအစက်အပြောက်အဘို့အမော်လ်တာအနီး choppy?
* (ခရုဇ်လည်း) + M (= မော်လ်တာ); “လှိုင်းထနေသော” ဆန့်ကျင်ဘက်ညွှန်ပြချက်ရှိ၏ ဝေလငါးအစက်အပြောက်ခရီးသွားလုပ်ငန်းတစ်ပုံစံအဖြစ်ဖော်ပြနိုင်
25 Mead မိခင်စွမ်းအင်သောက်မျိုချပြန်ပြောပြ
MAD အတွက် E ကို (= စွမ်းအင်) (DAM = မြင်း၏မိခင်,; “ပြန်ပြောပြ” မှတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်ညွှန်ပြ)
27 စှပျစှဲမှနျကနျကွောငျးရာခခြေကျြ Bimbo မှန်မှန်လက်ဝှေ့သမားရဲ့ကာကွယ်ရေး interrupts
<b> ငါ <မီတာ> B ကို <o> (သာ “ကိုမှန်မှန်” နည်းလမ်းအခြားအက္ခရာများ) Ali (= လက်ဝှေ့သမား, တနည်းမိုဟာမက်အလီ) တွင်
28 TABLE အထိမျးအမှတျသစ်ကို Balti နှင့်အရှေ့ပိုင်းအရက်များမိန့်ထုတ်
* (NEW Balti) + E ကို (= အရှေ့); ဆန့်ကျင်ဘက်ညွှန်ပြချက်ဖြစ်တယ် “အမိန့်”
ရယူထားသော (ဆိုလိုတစ်စုံတစ်ဦးကပေးချေ = အခမဲ့ဖျော်ဖြေရေး,) + <ch> အီး <AP> (သာ “မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့” နည်းလမ်းအလယ်အက္ခရာ) + IS
အသက် 30 GUTROT ခုနှစ်တွင် Rhineland ပြုလုပ်မယ့်ကောင်းသောအနီရောင် plonk
အူ ( “Rhineland မှာ” ဤအရပ်မှဂျာမန် = ကောင်းသော,) (ဂျာမန် = အနီ,) + ပုပ်; gutrot “plonk” ဤအရပ်, ကြမ်း, စျေးပေါအရက်ဖြစ်ပါသည်
01 DEMIJOHN Bottle သ Moore နဲ့ထရာဗိုလ်တာသရုပ်ဆောင်
Demi (= Moore က, တနည်းအမေရိကန်မင်းသမီး) + ယောဟန် (= ထရာဗိုလ်တာ, တနည်းအမေရိကန်ရုပ်ရှင်မင်းသား)
ဖော့ဆို့ရဲ့ (= အိုငျးရစျခရိုင်ရဲ့) + သင်္ဘောသား (= အသင်း)
03 LEES Python ကိုအနည်အနှစ်များအတွင်းရှာဖွေတွေ့ရှိ
<က c> LEES <အီး> (= Python ကို, Monty Python ရဲ့ Flying Circus ကနေတနည်းယောဟနျသ Cleese,); ပထမနှင့်နောက်ဆုံးအက္ခရာများကျဆင်းသွားနေကြတယ် “dis-ဖုံးလွှမ်း” နည်းလမ်းများ
တာဝန်ခံအမျိုးသမီးများကကျင်းပသည့် 05 HEDONIC Bacchanalian ပါတီ
[ကြက်အတွက် DO (= ပါတီ) (= အမျိုးသမီး)] + I ကို A / C (= တာဝန်ခံ); hedonic hedonistic များအတွက်တစ်လုံးကိုအဓိပ္ပာယ်တူ synonym ဖြစ်ပါသည်
06 MUSCADELLE လုပ်ငန်းကန်ထရိုက်တာစတိုးဆိုင်တဦးတည်း key ကိုစပျစ်သီး
[တစ်ဦးက (= တဦးတည်း) + DEL (= သော့ဆိုလိုတဲ့ကီးဘုတ်ပေါ်မှာဖျက်ရန်)] ကြွက်သား (= ကန်ထရိုက်တာ) တွင်; muscadelle အဖြူရောင်စပျစ်ရည်ကိုစပျစ်သီးကိုအမျိုးမျိုးဖြစ်ပါတယ်
EX- (= ဟောင်းဟောင်း) + <s ကို> ALT (= သင်္ဘောသား; နည်းလမ်းများပထမဦးဆုံးအက္ခရာကျဆင်းသွားတာဖြစ်ပါတယ် “ခဲ့ပျဉ်း-ပယ်ရှိခြင်း”)
တိတ်ဆိတ်ခြံသို့ 08 ရှယ်ရီလှည့်လည် – ကခိုင်ခံ့သောင့်
[SH (= (be) တိတ်ဆိတ်) + Y ကို (= ခြံထဲမှာ)] မှားယွင်း (= လှည့်လည်); ရှယ်ရီစပျစ်ရည်ကိုခိုင်ခံ့နေပါတယ်
တက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခံရဖို့ 09 CLARET အနည်းငယ်ပိုကောင်းအရက်သေစာ
ပိုကောင်းတဲ့အရက် “” အတွက် ( “အတန်ငယ်နှင့်ဒေါင်လိုက်ပြောင်းပြန် (ထ်ထမ်းဆောင်ရမည်)” Hidden) “; semi- & များမှာ
14 OENOLOGIST ကျွမ်းကျင်သူတဦးတည်းတစ်ပြည်နယ်အတွက် Lois တယ်
* (ONE Got Lois); “တစ်ပြည်နယ်ထဲမှာ” ဆန့်ကျင်ဘက်ညွှန်ပြချက်ရှိ၏ တစ်ဦး oenologist တစ်စပျစ်ရည်ကိုကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပြီး
menu ကိုထိပ်န်းကျင်ကိုပိုပြီးမုသာစကားကိုယက် 17 SOMMELIER စားပွဲထိုး
* က M <enu> (သာနည်းလမ်းများပထမဦးဆုံးအက္ခရာ “၏ထိပ်ပိုင်း”) (MORE မုသာ); “ယက်လုပ်ခြင်း” ဆန့်ကျင်ဘက်ညွှန်ပြချက်ရှိ၏ တစ်ဦး sommelier စားသောက်ဆိုင်တစ်ဦးသည်စပျစ်ရည်စားပွဲထိုးဖြစ်ပါသည်
ရဲဌာနဆိုင်ရာပွဲစဉ် 18 ACID စမ်းသပ်ခြင်း Ultimate decider?
ယခုလို “ဟု CID (= ပြစ်မှုဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ဆေးဦးစီးဌာန) စမ်းသပ်မှု” ဟုရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနဆိုင်ရာပွဲစဉ်အဖြစ်ဖော်ပြနိုင်
အရပ်တွင် 20 Sprite Elvish ရိုးရာလှည့်ဖျား
PR စနစ်ဆိုဒ် (= တည်ရာအရပ်) တွင် (= လှည့်ဖျား, တနည်းပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး)
21 PASS, BY လှတျလပျ Bentley အပေါ်လက်မှတ်လျစ်လျူရှု
PASS, (= လက်မှတ်, ပါမစ်) + B ကို <entle> Y ကို ( “လှတျလပျ” နည်းလမ်းအားလုံးပေမယ့်ပထမဦးဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးအက္ခရာများကျဆင်းသွားကြသည်)
box ကိုအပေါ် Geordie နှစ်လုံးကိုစက်ဘီး 22 DECANT လွှဲပြောင်း
ပုရွက်ဆိတ်နှင့် DEC ကို “box ကိုအပေါ် Geordie နှစ်လုံးကို” ဖြစ်၏ “စက်ဘီးစီးခြင်း” နှစ်ခုအမည်များကိုလှည့်လည်ဖလှယ်မှုဖြစ်ကြောင်းညွှန်ပြ
ဘာမျှမဆောင်သောစပျစ်သီး၏ 24 OVINE Sheepish ဆောင်လုလင်
အို (Pictorial = ဘာမျှမ,) + စပျစ်နွယ်ပင် (= ဆောင်လုလင်စပျစ်သီး၏)
26 ပီရူး Paddington ရဲ့ home page ကိုစပိုင်းတွင်ဒေါသထွက်နေရထားလမ်းပြည်ထောင်စု
: P (= စာမျက်နှာ) + E ကို <nrages> R ကို <ail> ဦး <nion> ( “အစပိုင်းတွင်” နည်းလမ်းသာအသုံးပြုကြသည်ပထမဦးဆုံးစာလုံး); မိုက်ကယ်ဘွန်းအားဖြင့်သားသမီးရဲ့ပုံပြင်များအတွက်ပီရူးထံမှ Paddington ထမ်းရွက်အက
Nezavisni 10.680 / Žica
Prošlo je dugo vremena jer je pao na pamet da blog slagalicu od žice.
Našao sam da je to ugodan, nije pretjerano oporezivanje, puzzle da počne moj blogging dužnosti u 2021.
Kao i danas je u utorak, tema je za očekivati,aovaj je lakše uočiti da su mnogi: mrežu sadrži mnoge reference na vino, kako je napravljen i kako se troši. Zaista, prilično impresivan broj tematskih sadržaja je smješteno u mreži.
vini sudafricani Episodio 218WineLibraryTVabbona
Siamo lieti di annunciare che le nostre porte sara
5 settembre 2010 httpwwwnytimescom20100906business